မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းဖို့ကြံ တဲ့ ရုရှားသမ္မတပူတင် ....ဒါပေမဲ့ ဒီတိုင်းတက်သိမ်းလို့မရ - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ရယ်စရာများ / မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းဖို့ကြံ တဲ့ ရုရှားသမ္မတပူတင် ....ဒါပေမဲ့ ဒီတိုင်းတက်သိမ်းလို့မရ
မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းဖို့ကြံ တဲ့ ရုရှားသမ္မတပူတင် ....ဒါပေမဲ့ ဒီတိုင်းတက်သိမ်းလို့မရ
Apann Pyay 10:01 PM ဗဟုသုတအစုံ , ရယ်စရာများ Edit
ရရှားသမ္မတပူတင် မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းဖို့ကြံတယ် ဒါပေမဲ့ ဒီတိုင်းတက်သိမ်းလို့မရဘူး
အဲ့ဒီ့သတင်းကြားတော့ ပူတင်လန့်သွားလေရဲ့ ဟုတ်တယ်လေ ဘယ်နိုင်ငံက လေဆိပ်တွေမှာ ရေတွင်းရေကန်တွေ တူး ထားလို့တုန်း လွှတ်လိုက်တဲ့ သူလျှိုကလည်းပေါ့သေးသေးမဟုတ် အရေးကြီးတဲ့ နျူကလီးယား မစ်ရှင်တွေကိုတောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူ အခုဟာက ရန်ကုန်လေဆိပ်ရောက်မှ ရေနစ်သေရတယ်လို့ ပူတင်ပေါက်ကွဲပြီး တောက်တစ်ချက်ေ ခါက်လိုက်တယ် ။
“တောက်…..” တစ်ခန်းလုံး ပူတင်ရဲ့တောက်ခေါက်သံ လွှမ်းမိုးသွားတယ် ဘေးမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကအစ ဘာမှ ၀င်မပြောရဲဘူး ပူတင်ကပဲ ဆက်ပြီး “ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ မဖြစ်တော့ဘူး ငါတို့လွှတ်လိုက်တဲ့ သူလျှိုမှန်းသိလို့ တမင်ထေ၄ာင်ချောက်ဆင် လုပ်ကြံလိုက်တာဖြစ်မယ် ။
နောက်ထပ် အတော်ဆုံး သူလျှိုသုံးယောက်ရွေးပြီး ထပ်လွှတ်ကွာ” “ရက်စ်…ဆာ” ရရှားနိုင်ငံရဲ့ အတော်ဆုံး သူလျှို သုံးယောက်ဖြစ်တဲ့ အာဘရန်ရယ်၊အဲဗက်ရယ် အလက်စီရယ်ကို ရွေးချယ်ပြီး ပူတင်ခေါ်တွေ့တယ်…။
“မင်းတို့ သွားရမယ်လမ်းက ခက်ခဲမယ် ကြမ်းတမ်းမယ် ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ဒီမစ်ရှင်ကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါ” “ရက်စ်..ဆာ” သုံးယောက်သား ကိုယ့်အထုပ်ကိုယ်သယ်ရင်း ရန်ကုန်ကို လေယာဉ်နဲ့ထွက်လာကြတယ်။
လေယာဉ်ဆိုက်ဆိုက်ခြင်း အဲလက်စီက အရင်ဆုံး လေယာဉ်ပေါ်ကရိုးရိုးမဆင်းပဲ ဂျွမ်းပြန်ခုန်ဆင်းတယ် “ပလုံ…” ထူးဆန်းတဲ့အသံကြောင့် ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်သား အပေါက်ဝကနေ အောက်ငုံကြည့်တယ် ။
“အိုးမိုင်ဂေါ့..” “အို့စ်..ရှစ်” ရေကဘယ်လောက် နက်လည်းမသိဘူး အဲလက်စီ ခုန်ချတာ အသံပဲကြားလိုက်တယ် လူတောင်မမြင်လိုက်ရဘူး ဆုံးဆုံးမြုပ်သွားတာ နှစ်ယောက်သား မျက်လုံးပြူး မျက်ဆံပြူးနဲ့ လန့်သွားတယ် ။
မလန့်ပဲမနေနိုင်ရိုးလား လေယာဉ်က ကုန်းပေါ်မှာဆိုက်မယ်ထင်နေတာ အခုကရေပေါ်မှာဆိုက်တာ လေဆိပ်တောင် ရိုးရိုးလေဆိပ် မဟုတ်ဘူး ရေပေါ်လေဆိပ် နှစ်ယောက်သား ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ ဘာပြောရမှန်းမသိ ဟုတ်တယ်လေ ရရှားမှာတောင် ရေပေါ်လေဆိပ်မပေါ်သေးဘူး ..။
အခုဟာကဖြင့်…… နှစ်ယောက်သား ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ လေယာဉ်အပေါက်ဝမှာ မတ်တပ်ရပ်နေတုန်း ခရီးသည်ေ တွကို ကြိုဖို့ လှေတွေရောက်လာတယ် ။ ဒင်းတို့လည်း ကြောင်တောင်တောင်နဲ့လိုက်သွားရှာတယ် ။ အနည်းဆုံးတော့ ပထမတစ်ယောက်ဘယ်လိုသေလည်းဆိုတာတော့သိရပြီ ရေပေါ်လေဆိပ်ထဲရောက်တာနဲ့ ရရှားကို လေဆိပ်အကြောင်း သတင်းလှမ်းပို့တယ် ။
သတင်းလည်းရရော ပူတင်အမေပါ လေတစ်ခြမ်းဖြတ်သွားတယ် ။ ဟုတ်တယ်လေ ရေပေါ်လေဆိပ်ဆိုတာ ကိုယ်တွေေ တာင် မတွေးဘူးတဲ့ အိုင်ဒီယာ ဒင်းတို့က ရေပေါ်လေဆိပ်တောင်ပိုင်နေပြီဆိုတော့ ဘယ်လောက်တောင် တိုးတက်ေ နပြီလည်း မသိဘူး စစ်တိုက်ရနိုးနိုး မတိုက်ရနိုးနိုး ဖြစ်ကုန်ပြီ …။
မထူးပါဘူး သတင်းဆက်ယူတာပဲကောင်းမယ် ရန်ကုန်လေဆိပ်ထဲက ငတိနှစ်ကောင်က တာဝန်ခွဲယူလိုက်တယ် ။ တစ်ေ ယာက်က မန္တလေးကို ထောက်လှမ်းမယ် တစ်ယောက်က ရန်ကုန်ကို ထောက်လှမ်းမယ် ပြီးရင် အခြေအနေ သတင်းပို့ မစ်ရှင်လည်း အောင်မြင် အေးဆေးအိမ်ပြန် အစီစဉ်က အာလုံးကွက်တိ အိုကေ စိုပြေပြီးသားပဲ အာဘရန်က မန်းလေးကို ထောက်လှမ်းဖို့ မြန်မာလေကြောင်းနဲ့ မန်းလေးဆင်းတယ်…
ကံဆိုးချင်တော့ သူထိုင်တဲ့ ခုံကမိုးယိုနေတယ် လေယာဉ်က လူပြည့်နေတော့ နေရာလည်း လဲလို့မရ လိုင်းကားလိုလည်း တွယ်စီးလို့ မရနဲ့ သည်းခံရင်းစီးတာ အဲကွန်းကအေးလိုက် မိုးကယိုလိုက်နဲ့ နောက်ဆုံး မန္တလေးကို ဦးနှောက်သွေးခဲပြီး တောင့်တောင့်ကြီးရောက်သွားတယ်။
လေကြောင်းလိုင်းကတော့ တာဝန်ကြေရှာပါတယ် အာဘရန် မိသားစုကို ၀မ်းနည်းကြောင်း သ၀န်လွှာပေးပို့တယ်။ သ၀န် လွှာရတော့ ပူတင် ဘယ်လိုမှ သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး ဒေါသတွေ ငယ်ထိပ်တက်ပြီး အစည်းဝေခန်းထဲမှာ အီးတွေလွှတ်ပေါ က်တော့တာ ဘယ်နှယ့် လေယာဉ်က မိုးယိုရတယ်လို့ .. ပြီးတော့ ရေငုတ်သဘောင်္တွေ လေယာဉ်တွေ အသင့်ပြင်ပြီး နောက်ဆုံးတစ်ယောက် သတင်းကိုစောင့်နေတယ် ။
အဲဗက်တစ်ယောက်ကတော့ ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ လှေတစ်စီးနဲ့ ပါးစပ်လေးဟပြီး လျှောက်ကြည့်နေရှာတယ်။ သူ့ခဗျာ အံသြလို့ကိုမဆုံးနိုင်ဘူး တစ်မြို့လုံး ရေပေါ်တိုက်တွေ ရေပေါ်ဈေးတွေ YBS လို ရေငုတ်သဘောင်္တွေကလည်း နေရာအနှံ့ အံသြနေလို့တော့ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး သတင်းပို့ဖို့ ရေပေါ်ဟိုတယ် တစ်ခုမှာအခန်းယူတယ်…. ။
ပါလာတဲ့လှေလေးကိုတော့ ဟိုတယ်အောက်မှာပဲ ကြိုးလေးနဲ့ချည်ထားလိုက်တယ် ။ အခန်းထဲရောက်ပါမှ အိတ်ထဲက လတ်တော့ပ်လေးကို ထုတ်ပြီး သတင်းပို့ဖို့လုပ်တယ် ။
လတ်တော့ပ်ဖွင့်လိုက်တော့ အားက 1% ပဲရှိတော့တယ် အားသွင်းမယ်ဆိုပြီး အားသွင်းကြိုးကိုထုတ်တယ် ပလပ်ပေါ က်မှာတပ်ပြီး ခလုပ်လေးနှိပ်လိုက်တယ် “လခွမ်းထဲမှာ မီးမလာဘူးဟ” ကြယ်ငါးပွင့် ရေပေါ်ဟိုတယ်မှာတောင် မီးမလာ ဘူးဆိုတော့ အဲဗက်တစ်ယောက် စိတ်ညစ်သွားတယ်…
မထူးဘူးဆိုပြီး ရှိတဲ့အားနဲ့ပဲ YBS ရေငုတ်သဘောင်္တွေအကြောင်း ၊ရေပေါ်တိုက်တွေ အကြောင်း၊ရေေ ပ်ါရှပ်ပြေး ရထားတွေအကြောင်း မေးလ်လှမ်းပို့လိုက်တယ်။
စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ အဲဗက်တစ်ယောက် ပြတင်းပေါက်ကနေ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ လှေသူခိုး ဟုတ်တယ် လှေသူခိုးမှ လှေသူခိုး အဲဗက်အောက်မှာ ချည်ထားတဲ့လှေကို ကြိုးဖြုတ်ပြီး အမှန်အကန် လှော်နေတာ အဲဗက် ဒေါသ အတောင့်လို က်ထွက်သွားတယ် ။
ရောက်ကတည်းက ဘာမှ အဆင်မပြေရတဲ့အထဲ လှေသူခိုးက တစ်မှောင့် ဒေါသတကြီးနဲ့ အောက်ပြေးဆင်းတယ် အောက်ရောက်တော့ ရေကျနေတာနဲ့ ရေထဲကနေ လမ်းလျောက်ပြီး လှေအနောက်ကို လိုက်တယ်။ သိပ်မလျောက် လိုက်ရပါဘူး ဆယ်လှမ်းလောက်ပဲလျောက်ရသေးတယ် ရေမြောင်းပေါက်ထဲ ကျွံကျသွားတယ် ဒါပေမဲ့ မသေဘူး အဲဗ က်ရေကူးတက်တယ်။
အဲဗက်ရေကူးပြီး ပြန်တက်လာတယ် ရေမွှန်းနေတော့ ခဏနားမယ်ဆိုပြီး လမ်းလယ်က အ၀ါရောင် ဘောတွေစီ ကူး သွားတယ် ။ ဘောပေါ်ရောက်တော့ ဘောဘေးက ဓါတ်တိုင်ကို မီးမလာလို့ အန္တရာယ်မရှိဘူးထင်ပြီး သွားမှီတယ် အဲ့ဒီမှာ ဓာတ်လိုက်ပြီး သေတာပဲ…. နောက်ဆုံးတစ်ယောက် သတင်းလည်းကြားရော ပူတင်တစ်ယောက် သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး ဘယ်နှယ့် မီးပြတ်နေတာတောင် ဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ မီးအားက ဘယ်လောက်ထိတောင်ကောင်းနေလို့တုန်း ပူတင်လက်နောက်ပစ်ပြီး ခေါက်တုန့် ခေါက်ပြန်လျှောက်ရင်းစဉ်းစားတယ် ။
နောက်ဆုံး သူကိုယ်တိုင် ရေငုတ်သဘောင်္စစ်တပ်ကို ဦးဆောင်ပြီး ရန်ကုန်မြစ်ကတစ်ဆင့် မြို့တွင်းကို သိမ်းပိုက် ဖို့လုပ် တယ် ။ ရန်ကုန်မြို့ထဲ ၀င်ခါစ ရှိသေးတယ် ပူတင့်ဘေးက သဘောင်္တွေအားလုံး ရေတွေဝင်ပြီး မြုပ်ကုန်တယ် ဘယ်သူမှ လည်း မပစ်ပဲနဲ့ ရေ၀င်ပြီး မြုပ်ကုန်တော့ သဘောင်္သားတွေလည်း သွေးပျက်ပြီး ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်ကုန်ပြီ ပူတင် သူ့သဘောင်္ကလူတွေကို အားတက်စကားပြောတယ်။
သဘောင်္သားတွေအားလုံး သွေးနည်းနည်းပြန်ရဲရုံရှိသေးတယ် သဘောင်္က တစ်ခုခုနဲ့ တိုက်မိသလို လှုပ်သွားတယ် အဖြစ် အပျက်က တိုက်တန်းနစ်ထက်ဆိုးတယ် တိုက်မိတာမှ Slow down ဂုံးနဲ့တိုက်မိတာ ရေငုတ်သဘောင်္ ၀မ်းဗိုက်ပွင့်ပြီးေ တာ့ ရေတွေဝင်လာတယ်
ပြေးတဲ့သူကပြေး ငိုတဲ့သူကငိုနဲ့ ပူတင်ကတော့ သွေးမပျက်ပဲ နာရီလေးကြည့်ရင်း မျက်စိမှိတ်လိုက်တယ် သေမဲ့ဘေး ပြေးတွေ့မယ်ဆိုတဲ့ သဘော နောက်ဆုံးရင်ဘတ်ထိ ရေတွေတက်လာတော့ ပူတင်တစ်ယောက် ရာဇ၀င်တွင်မဲ့ စကားကြီး ငါးခွန်းကို တစ်လုံးချင်းပြောခဲ့တယ်…… “လိ့ထဲမှပါကွား”
Credit . စနေမောင်ငိုး
Viaသန့်​ဇင်​ဝင်း / လမ်းပြကြယ်​ဖြူ
Source : https://www.facebook.com/zarni.htike
ရရှားသမ်မတပူတငျ မွနျမာနိုငျငံကို သိမျးဖို့ကွံတယျ ဒါပမေဲ့ ဒီတိုငျးတကျသိမျးလို့မရဘူး
စဈဗြူဟာ အတှကျ နယျမွအေခွအေနကေို ကှငျးဆငျးလလေ့ာဖို့လိုတယျလေ။ အရငျဆုံး မသိမျးခငျ သူလြှိုတဈယောကျ ကို မွနျမာစကားသငျပေးပွီးလှတျလိုကျတယျ ..ဒါပမေဲ့ ဟိုငတိက ရနျကုနျလဆေိပျရောကျတာနဲ့ ရနေဈသသှေားတယျ…။
အဲ့ဒီ့သတငျးကွားတော့ ပူတငျလနျ့သှားလရေဲ့ ဟုတျတယျလေ ဘယျနိုငျငံက လဆေိပျတှမှော ရတှေငျးရကေနျတှေ တူး ထားလို့တုနျး လှတျလိုကျတဲ့ သူလြှိုကလညျးပေါ့သေးသေးမဟုတျ အရေးကွီးတဲ့ နြူကလီးယား မဈရှငျတှကေိုတောငျ ဆောငျရှကျနိုငျတဲ့သူ အခုဟာက ရနျကုနျလဆေိပျရောကျမှ ရနေဈသရေတယျလို့ ပူတငျပေါကျကှဲပွီး တောကျတဈခကျြေ ခါကျလိုကျတယျ ။
“တောကျ…..” တဈခနျးလုံး ပူတငျရဲ့တောကျခေါကျသံ လှမျးမိုးသှားတယျ ဘေးမှာရှိတဲ့ဗိုလျခြုပျကွီးတှကေအစ ဘာမှ ဝငျမပွောရဲဘူး ပူတငျကပဲ ဆကျပွီး “ဒီအတိုငျးဆိုရငျတော့ မဖွဈတော့ဘူး ငါတို့လှတျလိုကျတဲ့ သူလြှိုမှနျးသိလို့ တမငျထေ၎ာငျခြောကျဆငျ လုပျကွံလိုကျတာဖွဈမယျ ။
နောကျထပျ အတျောဆုံး သူလြှိုသုံးယောကျရှေးပွီး ထပျလှတျကှာ” “ရကျဈ…ဆာ” ရရှားနိုငျငံရဲ့ အတျောဆုံး သူလြှို သုံးယောကျဖွဈတဲ့ အာဘရနျရယျ၊အဲဗကျရယျ အလကျစီရယျကို ရှေးခယျြပွီး ပူတငျချေါတှတေ့ယျ…။
“မငျးတို့ သှားရမယျလမျးက ခကျခဲမယျ ကွမျးတမျးမယျ ဘာပဲ ဖွဈဖွဈဒီမဈရှငျကို အောငျမွငျအောငျလုပျခဲ့ပါ” “ရကျဈ..ဆာ” သုံးယောကျသား ကိုယျ့အထုပျကိုယျသယျရငျး ရနျကုနျကို လယောဉျနဲ့ထှကျလာကွတယျ။
လယောဉျဆိုကျဆိုကျခွငျး အဲလကျစီက အရငျဆုံး လယောဉျပျေါကရိုးရိုးမဆငျးပဲ ဂြှမျးပွနျခုနျဆငျးတယျ “ပလုံ…” ထူးဆနျးတဲ့အသံကွောငျ့ ကနျြတဲ့နှဈယောကျသား အပေါကျဝကနေ အောကျငုံကွညျ့တယျ ။
“အိုးမိုငျဂေါ့..” “အို့ဈ..ရှဈ” ရကေဘယျလောကျ နကျလညျးမသိဘူး အဲလကျစီ ခုနျခတြာ အသံပဲကွားလိုကျတယျ လူတောငျမမွငျလိုကျရဘူး ဆုံးဆုံးမွုပျသှားတာ နှဈယောကျသား မကျြလုံးပွူး မကျြဆံပွူးနဲ့ လနျ့သှားတယျ ။
မလနျ့ပဲမနနေိုငျရိုးလား လယောဉျက ကုနျးပျေါမှာဆိုကျမယျထငျနတော အခုကရပေျေါမှာဆိုကျတာ လဆေိပျတောငျ ရိုးရိုးလဆေိပျ မဟုတျဘူး ရပေျေါလဆေိပျ နှဈယောကျသား ပါးစပျဟောငျးလောငျးနဲ့ ဘာပွောရမှနျးမသိ ဟုတျတယျလေ ရရှားမှာတောငျ ရပေျေါလဆေိပျမပျေါသေးဘူး ..။
အခုဟာကဖွငျ့…… နှဈယောကျသား ကွောငျတောငျတောငျနဲ့ လယောဉျအပေါကျဝမှာ မတျတပျရပျနတေုနျး ခရီးသညျေ တှကို ကွိုဖို့ လှတှေရေောကျလာတယျ ။ ဒငျးတို့လညျး ကွောငျတောငျတောငျနဲ့လိုကျသှားရှာတယျ ။ အနညျးဆုံးတော့ ပထမတဈယောကျဘယျလိုသလေညျးဆိုတာတော့သိရပွီ ရပေျေါလဆေိပျထဲရောကျတာနဲ့ ရရှားကို လဆေိပျအကွောငျး သတငျးလှမျးပို့တယျ ။
သတငျးလညျးရရော ပူတငျအမပေါ လတေဈခွမျးဖွတျသှားတယျ ။ ဟုတျတယျလေ ရပေျေါလဆေိပျဆိုတာ ကိုယျတှေေ တာငျ မတှေးဘူးတဲ့ အိုငျဒီယာ ဒငျးတို့က ရပေျေါလဆေိပျတောငျပိုငျနပွေီဆိုတော့ ဘယျလောကျတောငျ တိုးတကျေ နပွီလညျး မသိဘူး စဈတိုကျရနိုးနိုး မတိုကျရနိုးနိုး ဖွဈကုနျပွီ …။
မထူးပါဘူး သတငျးဆကျယူတာပဲကောငျးမယျ ရနျကုနျလဆေိပျထဲက ငတိနှဈကောငျက တာဝနျခှဲယူလိုကျတယျ ။ တဈေ ယာကျက မန်တလေးကို ထောကျလှမျးမယျ တဈယောကျက ရနျကုနျကို ထောကျလှမျးမယျ ပွီးရငျ အခွအေနေ သတငျးပို့ မဈရှငျလညျး အောငျမွငျ အေးဆေးအိမျပွနျ အစီစဉျက အာလုံးကှကျတိ အိုကေ စိုပွပွေီးသားပဲ အာဘရနျက မနျးလေးကို ထောကျလှမျးဖို့ မွနျမာလကွေောငျးနဲ့ မနျးလေးဆငျးတယျ…
ကံဆိုးခငျြတော့ သူထိုငျတဲ့ ခုံကမိုးယိုနတေယျ လယောဉျက လူပွညျ့နတေော့ နရောလညျး လဲလို့မရ လိုငျးကားလိုလညျး တှယျစီးလို့ မရနဲ့ သညျးခံရငျးစီးတာ အဲကှနျးကအေးလိုကျ မိုးကယိုလိုကျနဲ့ နောကျဆုံး မန်တလေးကို ဦးနှောကျသှေးခဲပွီး တောငျ့တောငျ့ကွီးရောကျသှားတယျ။
လကွေောငျးလိုငျးကတော့ တာဝနျကွရှောပါတယျ အာဘရနျ မိသားစုကို ဝမျးနညျးကွောငျး သဝနျလှာပေးပို့တယျ။ သဝနျ လှာရတော့ ပူတငျ ဘယျလိုမှ သညျးမခံနိုငျတော့ဘူး ဒေါသတှေ ငယျထိပျတကျပွီး အစညျးဝခေနျးထဲမှာ အီးတှလှေတျပေါ ကျတော့တာ ဘယျနှယျ့ လယောဉျက မိုးယိုရတယျလို့ .. ပွီးတော့ ရငေုတျသင်ျဘောတှေ လယောဉျတှေ အသငျ့ပွငျပွီး နောကျဆုံးတဈယောကျ သတငျးကိုစောငျ့နတေယျ ။
အဲဗကျတဈယောကျကတော့ ရနျကုနျမွို့ထဲမှာ လှတေဈစီးနဲ့ ပါးစပျလေးဟပွီး လြှောကျကွညျ့နရှောတယျ။ သူ့ခဗြာ အံသွလို့ကိုမဆုံးနိုငျဘူး တဈမွို့လုံး ရပေျေါတိုကျတှေ ရပေျေါဈေးတှေ YBS လို ရငေုတျသင်ျဘောတှကေလညျး နရောအနှံ့ အံသွနလေို့တော့ မဖွဈဘူးဆိုပွီး သတငျးပို့ဖို့ ရပေျေါဟိုတယျ တဈခုမှာအခနျးယူတယျ…. ။
ပါလာတဲ့လှလေေးကိုတော့ ဟိုတယျအောကျမှာပဲ ကွိုးလေးနဲ့ခညျြထားလိုကျတယျ ။ အခနျးထဲရောကျပါမှ အိတျထဲက လတျတော့ပျလေးကို ထုတျပွီး သတငျးပို့ဖို့လုပျတယျ ။
လတျတော့ပျဖှငျ့လိုကျတော့ အားက 1% ပဲရှိတော့တယျ အားသှငျးမယျဆိုပွီး အားသှငျးကွိုးကိုထုတျတယျ ပလပျပေါ ကျမှာတပျပွီး ခလုပျလေးနှိပျလိုကျတယျ “လခှမျးထဲမှာ မီးမလာဘူးဟ” ကွယျငါးပှငျ့ ရပေျေါဟိုတယျမှာတောငျ မီးမလာ ဘူးဆိုတော့ အဲဗကျတဈယောကျ စိတျညဈသှားတယျ…
မထူးဘူးဆိုပွီး ရှိတဲ့အားနဲ့ပဲ YBS ရငေုတျသင်ျဘောတှအေကွောငျး ၊ရပေျေါတိုကျတှေ အကွောငျး၊ရေေ ပျါရှပျပွေး ရထားတှအေကွောငျး မေးလျလှမျးပို့လိုကျတယျ။
စိတျညဈညဈနဲ့ အဲဗကျတဈယောကျ ပွတငျးပေါကျကနေ လှမျးကွညျ့လိုကျတော့ လှသေူခိုး ဟုတျတယျ လှသေူခိုးမှ လှသေူခိုး အဲဗကျအောကျမှာ ခညျြထားတဲ့လှကေို ကွိုးဖွုတျပွီး အမှနျအကနျ လှျောနတော အဲဗကျ ဒေါသ အတောငျ့လို ကျထှကျသှားတယျ ။
ရောကျကတညျးက ဘာမှ အဆငျမပွရေတဲ့အထဲ လှသေူခိုးက တဈမှောငျ့ ဒေါသတကွီးနဲ့ အောကျပွေးဆငျးတယျ အောကျရောကျတော့ ရကေနြတောနဲ့ ရထေဲကနေ လမျးလြောကျပွီး လှအေနောကျကို လိုကျတယျ။ သိပျမလြောကျ လိုကျရပါဘူး ဆယျလှမျးလောကျပဲလြောကျရသေးတယျ ရမွေောငျးပေါကျထဲ ကြှံကသြှားတယျ ဒါပမေဲ့ မသဘေူး အဲဗ ကျရကေူးတကျတယျ။
အဲဗကျရကေူးပွီး ပွနျတကျလာတယျ ရမှေနျးနတေော့ ခဏနားမယျဆိုပွီး လမျးလယျက အဝါရောငျ ဘောတှစေီ ကူး သှားတယျ ။ ဘောပျေါရောကျတော့ ဘောဘေးက ဓါတျတိုငျကို မီးမလာလို့ အန်တရာယျမရှိဘူးထငျပွီး သှားမှီတယျ အဲ့ဒီမှာ ဓာတျလိုကျပွီး သတောပဲ…. နောကျဆုံးတဈယောကျ သတငျးလညျးကွားရော ပူတငျတဈယောကျ သညျးမခံနိုငျတော့ဘူး ဘယျနှယျ့ မီးပွတျနတောတောငျ ဓာတျလိုကျတယျဆိုတော့ မီးအားက ဘယျလောကျထိတောငျကောငျးနလေို့တုနျး ပူတငျလကျနောကျပဈပွီး ခေါကျတုနျ့ ခေါကျပွနျလြှောကျရငျးစဉျးစားတယျ ။
နောကျဆုံး သူကိုယျတိုငျ ရငေုတျသင်ျဘောစဈတပျကို ဦးဆောငျပွီး ရနျကုနျမွဈကတဈဆငျ့ မွို့တှငျးကို သိမျးပိုကျ ဖို့လုပျ တယျ ။ ရနျကုနျမွို့ထဲ ဝငျခါစ ရှိသေးတယျ ပူတငျ့ဘေးက သင်ျဘောတှအေားလုံး ရတှေဝေငျပွီး မွုပျကုနျတယျ ဘယျသူမှ လညျး မပဈပဲနဲ့ ရဝေငျပွီး မွုပျကုနျတော့ သင်ျဘောသားတှလေညျး သှေးပကျြပွီး ဆောကျတညျရာမရဖွဈကုနျပွီ ပူတငျ သူ့သင်ျဘောကလူတှကေို အားတကျစကားပွောတယျ။
သင်ျဘောသားတှအေားလုံး သှေးနညျးနညျးပွနျရဲရုံရှိသေးတယျ သင်ျဘောက တဈခုခုနဲ့ တိုကျမိသလို လှုပျသှားတယျ အဖွဈ အပကျြက တိုကျတနျးနဈထကျဆိုးတယျ တိုကျမိတာမှ Slow down ဂုံးနဲ့တိုကျမိတာ ရငေုတျသင်ျဘော ဝမျးဗိုကျပှငျ့ပွီးေ တာ့ ရတှေဝေငျလာတယျ
ပွေးတဲ့သူကပွေး ငိုတဲ့သူကငိုနဲ့ ပူတငျကတော့ သှေးမပကျြပဲ နာရီလေးကွညျ့ရငျး မကျြစိမှိတျလိုကျတယျ သမေဲ့ဘေး ပွေးတှမေ့ယျဆိုတဲ့ သဘော နောကျဆုံးရငျဘတျထိ ရတှေတေကျလာတော့ ပူတငျတဈယောကျ ရာဇဝငျတှငျမဲ့ စကားကွီး ငါးခှနျးကို တဈလုံးခငျြးပွောခဲ့တယျ…… “လိ့ထဲမှပါကှား”
Credit . စနမေောငျငိုး
Viaသနျ့​ဇငျ​ဝငျး / လမျးပွကွယျ​ဖွူ